Watch here: Al Jazeera Investigates “The Hidden Genocide” | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
Watch here: Al Jazeera Investigates “The Hidden Genocide”
Watch here: THE HIDDEN GENOCIDE
This entry was posted on December 10, 2012, in နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← “ဖုံးကွယ်ထားတဲ့လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု” မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် | The Hidden Genocide (Documentary)
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အမှုအများဆုံးမြို့နယ် နှစ်ခုရှိ →